I-Geneva ukuya eNew York iinqwelomoya kwi-SWISS kunye ne-United Airlines ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Geneva ukuya eNew York iinqwelomoya kwi-SWISS kunye ne-United Airlines ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseSwitzerland eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-Geneva ukuya eNew York iinqwelomoya kwi-SWISS kunye ne-United Airlines ngoku.
Kukho imfuno yokuphumla yokuya eSwitzerland isuka eUnited States, kwaye ezi ziindaba ezamkelekileyo kubo bobabini abakhenkethi kunye nabakhenkethi beshishini.
I-SWISS iya kusebenza ukuya kuthi ga kwiinqwelomoya ezine ngeveki ukuya kwi-JFK yaseNew York ukusukela nge-14 kaDisemba ngo-2021.
I-United Airlines iza kuphinda iqhubeke ngenqwelomoya iNewark-Geneva ngo-Novemba 1, 2021, kunye neenqwelomoya ezine ngeveki.
I-United Airlines kunye ne-SWISS ngamaqabane okwabelana ngekhowudi kunye namalungu e-Star Alliance.
Imigca yomoya yamanye amazwe ye-SWISSUmphathi weflegi yelizwe laseSwitzerland, ubhengeze ukuba izakuqhuba kwakhona iinqwelomoya phakathi kweGeneva Airport (GVA) kunye neJohn F. Kennedy International Airport (JFK) yaseNew York ngeentsuku ezithile zeveki eqala ngoDisemba ka-2021. iveki ukuya kwiJFK ukusukela nge-14 kaDisemba ka-2021.
United Airlines ikwabhengeze ukuba inkonzo yayo phakathi kweGeneva Airport kunye neNewark Liberty International Airport (EWR) izakuqhubeka ngoNovemba 1, 2021, ngeenqwelomoya ezine ngeveki.
Iinqwelo-moya ezimbini zisebenzisana kunye kunye namalungu Star Alliance.
Kukho imfuno yokuhamba ukuya eSwitzerland kwaye ezi ziindaba ezamkelekileyo kubo bobabini bokuzonwabisa nakwabahambi bamashishini. Kuyinyani ngokukodwa kwabo bafuna iinqwelomoya eziya ngqo eGeneva naseVaud, ikanton ethetha isiFrentshi kunxweme lweLake Geneva. Isigqibo esenziwe yi-SWISS kunye ne-United sibalulekile kwishishini nakwezokhenketho kwidolophu elikomkhulu laseLausanne, ikhaya leMyuziyam yeOlimpiki, nakwizixeko ezingaselwandle ezinjengeMontreux neVevey. Ixesha lesibhengezo likwalungele ukuqala konyaka we-2021-22 we-ski kwiindawo zokuchithela ubusika, kubandakanya iiVillars, Les Diablerets kunye neLeysin, kunye naseGlacier 3000.
Indlela phakathi kweGeneva neNew York yenye yezona ndawo zonxibelelwano zembali kwisikhululo seenqwelomoya. Yasungulwa kanye emva kwemfazwe ngo-1947 yokuqhagamshela amaziko amabini eZizwe eziManyeneyo kwaye isebenze njengebhulorho yezopolitiko. Namhlanje, iGeneva likhaya kwimibutho yoorhulumente engaphezu kwama-30 kunye nee-NGOs ezimalunga nama-400. Phambi kobhubhane we-COVID-19, lo mmandla wabamba ngaphezulu kweenkomfa zamanye amazwe kunye neentlanganiso ngonyaka. Uninzi lwamazwe aseMelika anekomkhulu lengingqi eSwitzerland ethetha isiFrentshi kwaye isikhululo seenqwelomoya sisixhobo esibalulekileyo phakathi kweCanton yaseVaud kunye neUnited States kukhenketho lweshishini nolokuzonwabisa.